Boqorada Ingiriiska Oo Maalinta Xuska Dhalashadeeda Darajada SIR Ku Sharaftay Halyayga Liverpool Ee Kenny Dalglish Iyo Waxyaabaha Uu Ku Kasbaday | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Boqorada Ingiriiska Oo Maalinta Xuska Dhalashadeeda Darajada SIR Ku Sharaftay Halyayga Liverpool Ee Kenny Dalglish Iyo Waxyaabaha Uu Ku Kasbaday
(09-06-2018) Halyayga kooxda Liverpool ee Kenny Dalglish ayaa si rasmi ah loogu abaal mariyay darayada ay boqorada dalka Ingiriisku bixiso ee Sir kadib markii abaal marintan lagu soo beegay maalinta xuska dhalashada boqorada Ingiriiska. Kenny Dalglish ayaa lagu sharfay wixii uu kubbada cagta UK ku soo kordhiyay iyo waliba bini aadamnimada uu ka shaqayo oo uu si wayn amaan ugu helay.
Waxa kale oo xafladii abaal marinaha boqorada Ingiriiska darajooyin lagu gudoonsiiyay feedhyahanka miisaanka culus ee Anthony Joshua iyo xidiga ree England ee Jermain Defoe kaas oo isna abaal marintan ku helay hawlaha samafar ee uu hayo gaar ahaan qaabkii uu wiilkii yaraa ee Sunderland ee xanuunsanayay uu noloshiisa saamaynta layaabka leh ugu yeeshay.
Kenny Dalglish oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu xusuusta iyo waxtarka fiicnaa jamaahiirta kooxda Liverpool kaas oo isaga oo ciyaartoy ah iyo waliba isaga oo tababare ah soo madadaaliyay The Kopp ayaa ugu danbayn helay darajada Sir isaga oo 67 sano jir ah.
Markii horeba waxaa magaca Kenny Dalglish la raacin jiray King iyada oo hadda magiciisa la racin doono Sir Kenny Dalglish ama Sir King Kenny Dalglish wuxuuna waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxda dalkiisa Scotland ee Celtic halkaas oo uu 167 gool ku soo dhaliyay 322 kulan oo uuu soo ciyaaray.
Sir Kenny Dalglish ayaa xulka qarankiisa Scotland u saftay 102 kulan waana ciyaartoyga ilaa hadda rekoodkan haysta isaga oo 30 gool u soo dhaliyay laakiin waxa uu waayihiisii ciyaartoy iyo tababaranimo ee ugu fiicnaa uu ku soo qaatay Liverpool.
Sir Kenny Dalglish ayaa Liverpooll u soo saftay 515 kulan wuxuuna u soo dhaliyay 172 gool isaga oo noqday ciyaartoy iyo tababare wada noqday markii ay 1985 kii ma siibado ka dhacday garoonka Heysel Stadium.
Guud ahaan Sir Kenny Dalglish ayaa ku soo guulaystay 14 koob oo horyaalada Scotland iyo England ah isaga tababare ama ciyaartoy ah wuxuuna sidoo kale Liverpool ka soo caawiyay saddex koob oo koobka kooxaha Yurub ah.
Sir Kenny Dalglish ayaa kooxda Blackburn sanadkii 195 kii ka caawiyay in ay si layaableh ugu guulaysatay koobka Premier league, laakiin waxa uu amaan wayn ku helay sida bini aadamnimadu ku dheehan tahay ee uu u soo caawinayay dadkii ku waxyeeloobay musiibadii Hillsborough ee April 1989 kii isaga oo si joogto ah u soo caawinayay qoysaskii dadkii ku waxyeeloobay musiibadan.
Si kastaba ha ahaatee, Kenny Dalglish oo ilaa hadda ka mid ah shaqsiyaadka ay jamaahiirta Livrpool ugu jecel yihiin ayaa boqorada Ingiriiska ka helay darajada ‘knighthood’ iyada oo lagu abaal mariyay wixii uu kubbada cagta UK ka soo qabtay iyo waliba wax qabadkiisa bini aadamnimo ee uu soo waday.